Kenya oo Askar badan looga dilay Qarax ka dhacay Dhoobley [Sawirro]
DHOOBLEY, Soomaaliya - Ugu yaraan 8 Askari oo katirsanaa Ciidamada Kenya ayaa lagu dilay qarax Miino oo Kolonyo ay la socdeen lagula eegtay shalay gelinkii dambe duleedka degmada Dhoobley ee gobolka Jubbada Hoose.
Qaraxa ayaa haleeyay mid kamid ah gaadiidka Kolonyada Ciidamada Kenya xilli ay kasoo gudbeen xuduuda, kuna sii jeedeen Saldhig ay ku leeyihiin degmada Dhoobley, sida uu xaqiijiyay Sarkaal katirsan Wasaaradda Gaashaandhigga Kenya.
Wararka ayaa sheegay in labo Askari oo kale ay ku dhaawacmeen qaraxa miino, kuwaasi oo diyaarad looga soo qaadey Goobta lana dhigay Isbitaal ku yaalla magaalada Nairobi.
Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarka, waxaana ay ku faantay inay ku dishay 15 Askari oo saarnaa Gaari la beegsaday, kaasi oo gebi ahaantiisa ku burburay qaraxa miino.
Qaraxan ayaa qeyb ka ah weeraro joogto ah oo Ciidamada Kenya lagula eegto gobolka Waqooyi Bari iyo gudaha Soomaaliya kuwaasi oo ay ku dhinteen boqolaal Askari.
Al-Shabaab ayaa dhibaato xooggan oo dhanka amniga ku haysa Kenya, oo kamid ah dalalka Ciidamada ay ka joogaan Soomaaliya, kuwaasi oo tan iyo 2012 ka howlgalaya gobollada Jubbooyinka iyo Gedo.
Kenya ayaa dhawaan sheegtay in sababta ay u aas-aastay Jubbaland ay tahay in..
Uhuru oo xaqiijiyay in Al Shabaab ay dishay 9 kamid ah Ciidamada Kenya
Soomaliya 08.05.2018. 12:14
Ciidamada Kenya oo weeraray Saldhig Al-Shabaab, 24 xubnood oo la dilay
Soomaliya 27.10.2018. 13:38
Weerar askar lagu dilay oo ka dhacay Kenya [Fahfaahin]
Afrika 08.08.2018. 19:12
Weerar khasaaro geystay oo dhacay Xadka Soomaaliya iyo Kenya
Soomaliya 04.07.2018. 14:47
Kenya oo cabsi ka qabta weeraro lagu abaabulayo Soomaaliya
Afrika 22.07.2018. 16:22
AMISOM oo shaacisay sababta aysan ugu kalsooneyn Ciidamada DF
Soomaliya 03.12.2018. 09:15